Zimbabweans comes out in country first election after Mugabe | Devdiscourse News
Zimbabweans comes out in country first election after Mugabe
PTI Last Updated at 30 Jul 2018, 12:07 IST Zimbabwe
Mugabe, 94, who was ousted by the military in November, made a surprise intervention on the eve of the elections, calling for voters to throw ZANU-PF out of office. (Image Credit: Reuters)
Zimbabweans cast their ballots today in the country's first election since authoritarian leader Robert Mugabe was ousted last year, with concerns over fraud and the likelihood of a disputed result clouding voting day.
"I just have to do this. I have to see a better Zimbabwe for my kids. Things have been tough," Tawanda Petru, 28, an unemployed man voting in Mbare, a low-income district of the capital Harare, told AFP as polling stations opened across the country.
The election is Zimbabwe's first without Mugabe, who led ZANU-PF to power in a vote when the country became independent from Britain in 1980 and ruled for 37 years.
Speaking at his mansion in Harare yesterday, Mugabe said he hoped the election would "thrust away the military form of government."
As Zimbabwe's hectic politics reached fever pitch, Mnangagwa claimed Mugabe's remarks proved that Chamisa was in an alliance with Mugabe.
But Chamisa also spoke out saying: "I have nothing to do with what president Mugabe would want to say as a voter.
He is a citizen."Elections under Mugabe were marred by fraud and often deadly violence, and this year's campaign has been dogged by accusations the result will be rigged.
"After years of stasis, the events of November 2017 gave Zimbabwe the chance to dream again,"Mnangagwa said yesterday in an address on state radio.
"The governing ZANU-PF party needs to maintain a semblance of free and fair elections in order to attract fresh foreign investment,"said the London-based EXX Africa business risk consultancy.
"However, there remain serious concerns over vote credibility." With 5.6 million registered voters, the results of the presidential, parliamentary and local elections are due by August 4.
Nelson Chamisa of the MDC Robert Mugabe Mugabe Mnangagwa on 40 Chamisa on 37 voting election ZANU-PF Chamisa year